Mgbasa OziAlyzer: Sochie ma gbasaa Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Ka m na akwado maka ikuzi ihe omuma N'iji Social Media jiri Web Analytics n'izu a, otu akụkụ nke ọzụzụ bụ - ọzọ - inye ndị bịara ihe ọmụma ha chọrọ maka otu esi akpado mkpọsa ha nke ọma yana websaịtị. nchịkọta ngwá ọrụ dị ka Google Analytics. Ọ fọrọ nke nta ka m na-ezo aka ozugbo na URL na-ewu ihe maka Google Analytics - mana ọ na - emetụ m oke etu ngwa ọrụ si dị na mkpokọta nchịkọta atụmatụ.
Mgbasa ozi abụghị nanị echiche mgbe ị na-enye njikọ iji kwalite ọdịnaya gị, onyinye ma ọ bụ ihe omume. Ikwesiri ime atụmatụ ihe mkpado gị ga - abụ, ijide n’aka na ịnweghị mbiputegharị, ma nwee ike inyocha ha n’ụzọ dị mfe. Ọ bụ naanị echiche m, mana mgbe ị banyere nbanye na nchịkọta Google wee gaa Ngalaba Mgbasa Ozi, a ga-enye gị ezigbo mma interface ebe ahụ na-egosipụta mkpọsa gị ma nye gị ohere itinyekwu mkpọsa.
Nke ahụ bụ naanị ihe Mgbasa OziAlyzer arụzuola. CampaignAlyzer na-eme ka nkpado mgbasa ozi dị mfe. Ọ na-ewe otu nkeji iji hazie mkpọsa ọhụrụ, ma ị nwere ike ịmalite ịnya ụgbọ ala dị mkpa na weebụsaịtị gị n'ụzọ kachasị arụ ọrụ. Ọ bụ ihe ngosiputa agnostic mkpọsa azịza - na-arụ ọrụ na Google Analytics, Webtrends ma ọ bụ Adobe SiteCatalyst (Omniture).
Atụmatụ nke Mgbasa OziAlyzer:
Mfe Nweta - CampaignAlyzer bụ ngwa weebụ nke na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa nchekwa etiti ebe ndị otu nwere ike ịchekwa ụkpụrụ mkpọsa ahịa ha n'otu nchekwa data. Zọ a, ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa dijitalụ n'ofe nzukọ nwere ike imekọrịta na mkpado dị iche iche na ntanetị na ntanetị, ma hụ na nkwekọ na mkpado mgbasa ozi ha.
Akụkọ Channel - CampaignAlyzer ana achi achi nkado-anọgidesi site na-enye a "esi" na-akpado ụdị maka ngwa ọrụ. Ndị ọrụ nwere ike ịkọwa ụkpụrụ na mkpọsa gara aga dịka nduzi n'ọdịnihu. CampaignAlyzer na-ahụkwa na ọkwa dị ọcha dị ọcha site na igbochi ndị ọrụ na-akọwapụta usoro maka mkpado. Naanị ndị nchịkwa nwere ohere ịhazigharị ndepụta ọwa / ajụ.
Nnweta-Dabere Access - Mgbasa oziAlyzer na-enye ndị nwe akaụntụ na ndị nchịkwa ohere ịtọlite ​​ọnụ ọgụgụ ọ bụla nke ndị ọrụ atụmatụ ahọpụtara na-enye ohere ma nye ha ohere ịnweta akaụntụ ịchọrọ. Ndị ọrụ bụ 1) ndị nchịkwa nwere ohere zuru oke na mkpọsa niile na ntọala akaụntụ 2) ndị editọ nwere ike ịgbakwunye, wepu ma dezie mkpọsa 3) ma ọ bụ ndị na - agụ naanị ndị nwere ike ịlele mkpesa.
Nkọwa - Site na CampaignAlyzer, ndị ọrụ nwere ike ịkọwa mkpọsa maka ntụle n'ọdịnihu ma dokwuo anya ajụjụ banyere mkpọsa ahụ. A na-echekwa nkọwa na nchekwa data anyị, yabụ enwere ohere ịnweta ozi niile kachasị ọhụrụ gbasara mkpọsa ọ bụla.
Akpado URL Case - Usoro mgbasa ozi nwere ike ịbịa na ngwakọta nke mkpụrụedemede ukwu na nke nta n'ihi nkwekọrịta na-ekwekọghị na-akpọ aha. Nke a nwere ike ime ka mgbasa gbasaa na ntinye dị iche iche na akụkọ sitere na okporo ụzọ, nke na-eme ka nyocha sie ike karị. CampaignAlyzer na-enye nhọrọ ịmanye usoro mgbasa ozi niile iji belata obere okwu, na-eme ka ndenye na-agbakwunye ma na-eme maka nchịkọta akụkọ na nyocha dị mfe.
Nnukwu Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - Akụkụ a dị elu bara uru maka njikwa mgbasa ozi buru ibu. Site na njikwa njikwa nnukwu, ị nwere ike ịmegharị mkpọsa nke ejiri mmemme ndị ọzọ, dị ka Microsoft Excel ma ọ bụ Google Docs, ma bubata ha na CampaignAlyzer.
Mbupụ data - Ndị na-ahazi nwere ike ịchọ ịkekọrịta mkpọsa na URL ndị emetụtara na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ere ahịa, na-enyeghị ha ohere iji ngwaọrụ ahụ. CampaignAlyzer na-edozi mbipụta a site n'inye usoro ikpo okwu maka mbupụ mkpọsa na Excel, CSV na faịlụ ndị akọwapụtara.
Model Model - organizationsfọdụ òtù na-ahọrọ ịkọwa ntụgharị ha n'ịntanetị na mkpọsa mbụ, kama nke kachasị ọhụrụ. Nchịkọta Google, na ndabara, na-echegharị ntụgharị na mkpọsa kachasị na nso nso a. CampaignAlyzer na-enye nhọrọ iji soro ojiji site na ụdị ọ bụla. Y’oburu n’ichoo nsuso mbu, CampaignAlyzer ga etinye aka n’ihe ajuju ajuju ajuju “utm_nooverride = 1
Shortener URL - CampaignAlyzer ahuhu Google URL shortening ọrụ [goo.gl] maka mfe URL nkekọrịta na nkesa gafee mmadụ mgbasa ozi na ndị ọzọ na ahịa ọwa. Ọrụ a na-enye nhọrọ nke iji obere ụdị nke tagged URLs.
Tags: nchịkọta mkpọsa nyochankọwa mkpọsankpado mkpọsamkpọsa mkpọsaomniture mkpọsa nsusosaịtịcatalyst mkpọsa nsusoịkpadonsuso webtrends mkpọsa